3d တံဆိပ်, စိတ်တိုင်းကျတံဆိပ်ကြိုးကွင်း, ကာတွန်းခွေး Tag ကို - ကို Global အနုပညာလက်ဆောင်များ
တံသင် & တံဆိပ်
ခွေး Tag ကို
နယူး & ပူပြင်းတဲ့ထုတ်ကုန်တွေ
နမူနာပြခန်းမှ: ကျနော်တို့ပွင့်လင်းဖြစ်ကြပြီးတကယ် yo မျှော်လင့်ပါတယ် ...
Moutain မာရသွန် Meda spinning စိတ်တိုင်းကျရောင်စုံ ...
MTB စွန့်စားမှုများနှင့်မြက်ခင်းပြင်လွန်ကဲမာရသွန် SL ...
s ကို 2019 Chaya သောတောင်ပေါ်မာရသွန်အဘို့အ slider တံဆိပ် ...
3D အက္ခရာ တင်. သွပ်အလွိုင်းမှတ်ဉာဏ်အကြွေစေ့
Professional ကလက္ကားစျေးနှုန်း Anti-ကိုရွှေအမှတ်တရပစ္စည်း ...
စိတ်ကြိုက် 3D သွပ်အလွိုင်းဖျကြွေမှတ်ဉာဏ်အကြွေစေ့
OEM ကို 3D သို့ကာစ်သွပ်အလွိုင်းစိန်ခေါ်မှုအကြွေစေ့ Die
custom ရှေးဟောင်း 3D မေပယ် Bottle သအရွက်ကိုလက်စသတ် ...
သွပ်အလွိုင်း Keychain ဝိုင်ပုလင်းဖောက်တံ
High Quality သတ္တု Keychain ဖွင့်လှစ်ပုလင်းသွပ်
custom ဆန့်ကျင်ရွှေကို 3D လေယာဉ်ပျံ Bottle သဖွင့်လှစ်
OEM နီ Transparent အရောင်ပရိဘောဂသတ္တုရတနာ ...
OEM အစိမ်းရောင် Transparent အရောင်အသီးသတ္တုလက်ဝတ်ရတနာ ...
OEM ဥ-ပုံသွင်းအပြာပျော့ကြွေအရောင်သတ္တုယုဒလူ ...
OEM ကို Crown Transparent အရောင်သတ္တုရတနာပုံသွင်း ...
အခမဲ့ဒီဇိုင်းအစိမ်းရောင် Transparent အရောင်တိရိစ္ဆာန် meta ...
Black ကသတ္တုလက်ဝတ်ရတနာ box ကို shaped အခမဲ့ဒီဇိုင်းကြက်ဥ ...
ဖက်ရှင်စတိုင်လ် bowknot ပန်းပွင့်သတ္တုလက်ဝတ်ရတနာ box ကို ...
စိတ်ကြိုက်ပွင့်လင်းအရောင်သတ္တုခရစ်စမတ် je ...
အကွောငျး & ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအနုပညာလက်ဆောင်များ
တံဆိပ်နှင့်ဆုချီးမြှင့်, Keychain, ခွေး tag ကို, Bottle သဖောက်တံနဲ့အဆို့, ဂေါက်သီး: Co. , Ltd ပေးနေရတာကိုသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးလက်တွဲဖော်, စီမံကိန်းကိုအကြံပေးဖြစ်အာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်သင်ပိုမိုမြင့်မား values.Main ထုတ်ကုန်အောင်မြင်ရန်ကူညီပေးနေထားပြီး, 2010 တည်ထောင်ခဲ့သောဂလိုဘယ်အနုပညာလက်ဆောင်များ စသည်တို့ကိုလမ်းဆုံလမ်းခွများနှင့်ဦးထုပ်ကလစ်, Bookmark, Tie ကလစ်, ဓာတ်ပုံဘောင်, ရေခဲသေတ္တာသံလိုက်, ခါးပတ်ထိကပေါက်, လက်ဝတ်ရတနာ box ကိုခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များနှင့်ကာတွန်းလက်ဆောင်တွေ,
စျေးကွက် WE တာဝန်ထမ်းဆောင်:
GSport ပွဲနှင့်အခန်းအနားဆု, ကာတွန်းနှင့်ကြော်ငြာပရိုမိုးရှင်းများ, အားလပ်ရက်နှင့်ခရီးသွားအမှတ်တရပစ္စည်းများ, စီးပွားရေးနှင့်ဝိုင်လက်ဆောင်စသည်တို့
မဟာဗျူဟာ: အရည်အသွေး, Professional, ဒီဇိုင်း, Creative, SERVICE ကို
အရည်အသွေး: ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမာခံအရည်အချင်းကိုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုနှင့်တည်ငြိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြားဆက်ဆံရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များဖွဲ့စည်းရန်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့အနာဂတ်၌ပင်ပိုကောင်းပြုလိမ့်မည်။
ဒီဇိုင်း: ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအေအာရ်တီဆေးလက်ဆောင်များဒီဇိုင်းအဖွဲ့ရှိတယ်ဆိုတာအနည်းငယ်ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်အားဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဒီဇိုင်းနှစ်မျိုးလုံးလုပ်ပါ။ ဒီဇိုင်းများစျေးကွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းပေါ်အခြေခံပြီးနှင့်သင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျယ်ကူညီပေးသည်ထားတဲ့အရည်အသွေးမြင့်မားထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်!
ကို Creative: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွယ်ဝတဲ့အတွေ့အကြုံကိုအသီးအနှံမှကန့်သတ်သည်မဟုတ်, စျေးကွက်များလွန်း။ ကမ္တာ့အနုပညာလက်ဆောင်များအားဖြင့်ကို Creative စိတ်ကူးများနှင့်ဒီဇိုင်းကိုသင်စျေးကွက်အနိုင်ရကူညီမည်!
ဝန်ဆောင်မှု: ကျွန်ုပ်တို့၏, 12 နာရီတစ်ရက်,6ရက်တစ်ပါတ်နှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြီးနောက်-အရောင်းဝန်ဆောင်မှုအပြင်းအထန်တောင်းဆို
ကျွန်တော်တို့ & client အကြံပြု
ကျွန်တော်တို့၏ & ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအနုပညာလက်ဆောင်များ Co. , Ltd
Shiwan မြို့, Huizhou စီးတီး, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်
အသားပေးထုတ်ကုန်များ, မြေပုံအညွှန်း, မိုဘိုင်းဆိုက်ကို
Keychain, တံဆိပ် Spinning, 3d Keychain, တံဆိပ်, သွပ်အလွိုင်းတံဆိပ် / Pin, 3d တံဆိပ် / Pin,